Isku aadka kooxaha wareega 16-ka ee Champions League-ga oo la sameeyey – SBC
Isku aadka kooxaha wareega 16-ka ee Champions League-ga oo la sameeyey
Waxaa la sameeyey isku aadka kooxaha ka qayb galaya wareega 16-ka ee horyaalka Champions League-ga waxaana fooda la isku galiyey kooxo waa weyn sida Napoli oo gurigeeda ku qaabili doonta kulanka ugu horeeya kooxda Chelsea, sidoo kale kooxda Arsenal ayaa kulanka ugu horeeya marti u noqon doonta kooxda AC Milan, taasi oo macnaheedu yahay in labada kooxeed ee Ingiriiska ee ka qayb galaya wareegan ay ku soo aadeen kooxo Talyaani ah.
Kulankii ugu dambeeyey ee dhexmarey AC Milan & Arsenal kulan ka tirsan Champion League-ga waxaa0-2 aggregate ku badisey Arsenal ka dib markii ciyaaryahanka Cesc Fabregas oo dhawaan ku biiray Barcelona uu dhaliyey gool caaqibo badan daqiiqadii 84-aad kaasi oo uu labeeyey daqiiqadii 90-aad Emmanuel Adebayor oo haatan ka tirsan Manchester City balse amaah ahaan kula jooga kooxda Tottenham sidaasi waxaa looga tuurey wareega 16-ka AC Milan.
Arsenal sanadkaasi waxay noqotey kooxdii ugu horeysya ee Ingiriis ah oo ku garaacda AC Milan garoonkeeda San Siro ee magaalada Milan.
AC Milan waxay ku guuleystey 7 goor Champion League-ga iyadoo ka hooseysa 2 Real Madrid oo 9 jeer la hoyotey koobkaasi.
Taliyaaniga kooxda kale ee ka socota ee Inter waxay marti u noqon doontaa kulankeeda ugu horeeya kooxda Marseille ee dalka Faransiiska.
Talyaaniga waxaa sanadkan ka socda sadex kooxood Napoli, AC Milan & Inter waana markii ugu horeysay oo uu ka bato Spain oo ay ka socdaan labada kooxood oo kaliya oo kala ah Barcelona & Real Madrid tan oo ah markii ugu horeysay tan iyo isku aadkii 2004/05.
Zenit v Benfica~
Ku darso intii aad horey uga ogeyd;
Wareegan 16-ka sanadkan waxaa ka qayb galaya 7 kooxood oo horey ugu soo guuleystey koobkan kuwaasi oo kala Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, AC Milan, Inter Milan, Marseille & Benfica , sidoo kale kooxaha Basel, Napoli, Zenit St Petersburg ayey tahay markii ugu horeysay ay ka qayb galaan koobkan halka kooxda Apoel oo ah kooxdi iugu horeysay ee ka socota Qubrus (Cypriot) ee abid heerkan soo gaarta.
Wareegan waxaa ku soo baxay kaalinta koowaad ee Group-yada kooxaha kala ah:
Kooxaha ku soo baxay kaalinta labaad.
C.raxmaan cabdi axmed says:
Waxaa ku guuleysanayo championka napoli ama cavani
ganbiyoon waxakugulesanayo kooxda chelsea
waxakuguulaysanaya barcelona ama real madrid